Ihe nkiri Martin Scorsese na-esote maka Apple TV +, gbasaa nkedo ya | Esi m mac
Martin Scorsese na-esote nkiri, Ndị ogbu nke ifuru ọnwa, ka dị anya site na ịmalite mmepụta, ihe nkiri nke ga-abụ nke izizi na Apple TV +, mgbe nkwekọrịta nke onye isi ya na usoro vidiyo gụgharia ruru obere afọ gara aga.
Akụkọ kacha ọhụrụ metụtara ihe nkiri a nwere ike ịchọta na Oge ikpebi. Dabere na usoro a, William Belleau, Louis Cancelmi, Jason Isbell na Sturgill Simpson bụ ndị ọhụụ ọhụrụ ga-abụ akụkụ nke ihe nkiri ahụ site na ihe nkiri nke pụtakwara Leonardo Dicaprio na Robert DeNiro na nke gosiri anyị akụkọ banyere ogbugbu Osage na 1920s.
Ihe omumu ohuru ndi sonyeere ndi mmadu, ọ nyeworị ọrụ ya na fim ahụ:
William Belleau Ọ ga-egwu Henry Roan, onye Osage na-elekọta anụ ụlọ yana mmekọrịta chiri anya na ezinụlọ DiCaprio's Burkhart.
Louis Cancelmi bụ Kelsie Morrison, a obodo hustler na enyi nke Burkhart.
Jason Isbell, onye na-eme ihe nkiri mbụ ya na fim ahụ, na-egwu Bill Smith, onye mmegide nke Ernest Burkhart.
Sturgill simpson Ọ na - esonye dịka onye mmeri aha ọjọọ na onye na-azụ ahịa Henry Grammer.
Ihe nkiri ọhụrụ a bụ dabere na akwukwo Ndị na-egbu ọchụ nke ọnwa Ifuru: Ọnwụ Osage na ọmụmụ nke FBI, akwụkwọ banyere usoro igbu ọchụ nke Osage Native America biri na Oklahoma.
Edere ihe nkiri a na 1920s ma soro ihe nchoputa nke mmanu di n'okpuru ala nke ndi American Indian. Nnyocha ahụ metụtara okwu a ọ bụ ihe bu ụzọ tupu FBI.
Ndị ogbu nke ọnwa ifuru ga-ebu ụzọ wepụta ya na ụlọ ihe nkiri, iji sọọ mpi na Hollywood Oscars Oscars, na-eru ọrụ vidiyo na-asọpụta ka izu ole na ole gachara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Ihe nkiri Martin TV Stirsese na-abịa n'ihu Apple TV + na-agbasawanye ndị ọrụ ya